, အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် NAB ပြရန်သတင်း - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Megahertz ဗိုလ်မှူးအမေရိကန်ထုတ်လွှင့်အဘို့အကြီးစား-Scale ကိုအိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းဆွတ်ခူး
Calrec Brio အီဂျစ်သဲကန္တာရအတွင်း၎င်း၏ Cool သိမ်းထားပြီး
Dielectric အင်ဂျင်နီယာများအောက်တိုဘာလစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပွဲများမှာတီဗီအင်တင်နာထုတ်လုပ်မှုနှင့် RF စောင့်ကြည့်စိန်ခေါ်မှုများ Explore မှ
QoE အာမခံချက် & 4K မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းလိုအပ်ချက်များအဘို့အထိုင်ဝမ်ရဲ့ Chunghwa Telecom selection Telestream
ENCO အဖေရေဒီယို Automation နှင့်အတူ KDNK-FM ရေအင်အားကြီးနိုင်ငံများအမျိုးစုံရအသံလွှင့်စစ်ဆင်ရေး
ခေတ်သစ်ကိုတွင်သတ်မှတ်မည် Tech မှစက်ရုံများအတွက်ကျားနည်းပညာသိုလှောင်မှုနဲ့ Networking ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်
မြက်ချိုင့် IBC 2019 မှာဆုချီးမြှင့်ဝင်းနှင့်အတူစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရှေ့ဆောင်အဖြစ်ရာထူးခိုင်မာ
Forbes မဂ္ဂဇင်း "30 လက်အောက်တွင် 30" အတွက်ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးအသံ Lounge ဟာရဲ့ Becca Falborn
အနီရောင်ဧရာ မှစ. နယူးသင်ခန်းစာနဲ့အတူ " သာ. ကောင်း၏ခေါ်ရန်ရှောလုသည်" မှသည်တမင်တကာ ရည်ရွယ်. မကောင်းပါဖွင့်ပွဲအဆက်မပြတ်ပုံတူပွား
SeeBoundless Blackmagic EGPU Pro ကိုအတူအမေဇုံမိုးသစ်တော 3D တိုးပွား Reality မော်ဒယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့
Home » သတင်း » Megahertz ဗိုလ်မှူးအမေရိကန်ထုတ်လွှင့်အဘို့အကြီးစား-Scale ကိုအိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းဆွတ်ခူး
Megahertz ဗိုလ်မှူးအမေရိကန်ထုတ်လွှင့်အဘို့အကြီးစား-Scale ကိုအိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းဆွတ်ခူး
အသစ်က All-IP ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတင်ဒါအနိုင်ရရှိ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းကွန်ယက်ဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုန်ဆောင်မှုများကို Megahertz
လန်ဒန်, ဗြိတိန်, 22 မေလ 2019: Megahertz, Ltd, ပုံသေနှင့်မိုဘိုင်း application များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော, စိတ်ကူးယဉ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပို့ဆောင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူစနစ်များကိုပေါင်းစပ်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရလက်တွဲဖော်, အကောင်အထည်ဖော်ရန်တည်ဆောက်, စမ်းသပ်မှုများနှင့် IP ကို ​​Workflows ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကြီးမားတဲ့အမေရိကန်သတင်း-based ထုတ်လွှင့်ကခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ဗဟိုလန်ဒန်မှာဟောငျးလမ်းမှ၎င်း၏အကြီးစားလန်ဒန်ရုံးများနှင့်ဥရောပ HQ နေရာပြောင်းရွှေ့ supporting ။
စီမံကိန်းကာလအတွင်း 2019 ၏သင်တန်းကာလအတွင်းပြီးစီးရန်မျှော်မှန်းထားသည်, Megahertz ပုဖို့အသင်းရဲ့ကတိကဝတ်လမ်းညွှန်နှင့်ထောက်ပံ့အပါအဝင် IP ကိုအကောငျအထညျဖျော၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူထုတ်လွှင့်ကူညီကြမည် SMPTE 2110 လမ်းပြမြေပုံ။
အဆိုပါပြောင်းရွှေ့ HQ ထုတ်လုပ်မှု, အလှူငွေ, စတူဒီယိုအစီအစဉ်များ, ENG / ရုပ်ရှင်သမားတွေ၏ထောက်ခံမှု၎င်း၏သတင်းလိုင်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများအတွက်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကမကထ programming ကိုများအတွက်တည်းဖြတ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Megahertz တစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာနှင့်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားပြီးနောက်တင်ဒါအနိုင်ရ: "ကျနော်တို့ကြောင့်အလုပ်၏ဖောက်သည်ရဲ့နယ်ပယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံကနားလည်မှုကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ သူတို့ကအစကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တန်ဖိုးကိုငါတို့သည်မြင်လျက်နှင့်ပွင့်လင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထားရှိမည်ဟူသောအချက်ကိုတန်ဖိုးထား "Jon Flay, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Megahertz ကပြောသည်။
စက်ရုံစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် system လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများပေးအပ်ခြင်းမပြုမီ၎င်း၏ Ely-based ဌာနချုပ်မှာပြီးစီးရန်နှင့်အတူ Megahertz ရဲ့သော့ချက်တာဝန်များ, အဆုံးမှအဆုံးသို့ကင်မရာကွင်းဆက်, ပြင်ဆင်ရန် Workflows, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထောက်ခံမှုနှင့်စက်ရုံရဲ့ IP ကွန်ရက်တပ်ဆင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့ဖြစ်ကြ၏။
စက်ရုံကျောထောက်နောက်ခံအဆိုပါဗိသုကာတစ်ဦးန်းကျင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် Evertz အိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် Calrec, CatDV, IPE ကဲ့သို့ပေးသွင်းထံမှအသစ်သောနည်းပညာတစ်ခုခင်းကျင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက် Leyard, Matrix, OpenDrives Object, Sony က, Vizrt နှင့်ရပ်ကွက်-Beck ။
'' Out-of the-box ကို '' ဖြေရှင်းနည်းများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုပြီးထူထောင် Dante ဖြေရှင်းချက်၏ကျော် AES67 / ST2110-30 များအတွက်အလိုဆန္ဒ၏အသံဘို့ရွေးကောက်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်း၏နို့စို့အရွယ်နေသော်လည်း SMPTE 2110-30 အောင်မြင်စွာပေးသွင်းတဲ့အကွာအဝေးအားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးစနစ်စိတ်ထဲ၌ဤအတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
သူတို့ပူဇော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရပ်ကွက်-Beck ရဲ့ PreMo မိုက်ကရိုဖုန်းအသံချဲ့စက် interfaces ရှေးခယျြခဲ့သညျ SMPTE 2110-30 နှင့်အတူပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် Calrec အသံဖိုင် တစ်ခုက IP ကို ​​interface နှင့်ကျော် Evertz အခြေခံအဆောက်အအုံ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးပြည့်စုံနည်းပညာရဲ့ Refresh ဖြစ်ပေါ်ရန်အဘို့အဒါဟာ HQ နေရာပြောင်းရွှေ့လမ်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်စားသုံးသူများ၏ဖန်ဖို့ကင်မရာ၏ဖန်ထံမှပြေးတစ်ဦးအဆုံးမှအဆုံးသို့အိုင်ပီလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ခဲ့သည်," Flay ကဆိုသည်။ "တစ် All-IP ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသူတို့ကိုအစီအစဉ်ကိုချမှတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအစီရင်ခံ၏အခြေအနေတွင်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်သွက်လက်ကိုငါပေးမည်။ အဲဒါကိုမှကြွလာသောအခါသူတို့ကအခုအချိန်မှာထုတ်လွှင့်နည်းပညာ၏အလွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းမှာ SMPTE ST 2110 ။ သူတို့ကထွက်လှိမ့်နှင့်အသုံးပြုရန်ဘယ်လို defining ကျွန်တော်နှင့်အတူကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေမယ့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ "
Megahertz, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုပေးဒီဇိုင်း, အင်ဂျင်နီယာနှင့်တသမတ်တည်းမြင့်သော fixed အရည်အသွေးနှင့်မိုဘိုင်း turnkey စနစ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူသည်။ 4K, 8K, UHD, တိမ်တိုက်နှင့် IP-based Workflows အပါအဝင်မျိုးစုံအသစ်သောပုံစံများ, ရန်ဖက်ပြောင်းအလယ်၌ကြောင်းကိုတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင် System Integration သကဲ့သို့၎င်း, ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဗိသုကာ၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အိုင်တီနောက်ခံနှစ်ဦးစလုံးထံမှရေးဆွဲကာစိတ်ကူးယဉ်, ရှေ့ဆက်-တှေးအချေါနှငျ့အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာချဉ်းကပ်မှုသေချာစေရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားကြသည်ရိုးရာနှင့်ဖြတ်တောက်နှစ်ဦးစလုံးအစွန်းစီမံကိန်းများကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-သည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာရုံနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်ညာဘက်ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေဖို့နယ်နိမိတ်တွန်းအားပေး, Megahertz သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့သောအဆောက်အဦများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အော်ပရေတာများကရင်ဆိုင်ရတဲ့တစ်ဦးချင်းစီနည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစိန်ခေါ်မှုများဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးကြောင်းပြောင်းလဲနေသောနှင့်ဒဏ်ခံ bespoke စနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေး က်ဘ်ဆိုက်များ, State-Of-The-Art စတူဒီယို, ကွန်ယက်ကိုစစ်ဆင်ရေးစင်တာများ, ပညာရေးအဆောက်အဦများနှင့်မိုဘိုင်းအပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့် / newsgathering ယာဉ်များ။
တစ်ဦး 2000 စတုရန်းမီတာအင်ဂျင်နီယာ Cambridgeshire အတွက်စက်ရုံ, ဗြိတိန်နှင့်တစ်ဦးစင်္ကာပူရုံးကနေက၎င်း၏ client များအမှုဆောင်ခြင်း, Megahertz စနစ်များကိုတောင်အကြီးဆုံး-ထည် pre နှင့်ယာဉ်များအဘို့ကိုယ်ပိုင် coachwork ထွက်သယ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
1982 ကတည်းကထူးချွန်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူ Megahertz အစိုင်အခဲဘဏ္ဍာရေးကျောထောက်နောက်ခံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အရှည်ဆုံးရပ်တည်မှုသမိုင်းတစ်ဦးနှင့်အတူစနစ်များကိုပေါင်းစပ်အတွက်လွတ်လပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ထိုကဲ့သို့သောဘီဘီစီ, BT မီဒီယာ & အသံလွှင့်, Globecast အဖြစ်မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုဖောက်သည်ထံမှထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနိုင်ရ , RaceTech, Vive တီဗီ, RT ကိုနှင့် e.tv.
သြစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးမြို့စီမံမီဒီယာန်ဆောင်မှုများပေးသူ, NPC မီဒီယာမှာဆက်သွယ်ရေးအဆင့်မြှင့်မှုများပလေးအောက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ - စက်တင်ဘာလ 13, 2019
မြင်ယောင်ကြည့်ပါသည့် Software များအနာဂတ်ဖို့ေူပာင်းလဲရေးဖြေလျှော့ရေးအမေရိကန်, အမွေအနှစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ပံ့ပိုးမှုကမ်းလှမ်း - စက်တင်ဘာလ 13, 2019
All-IP ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အပံ့ ဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုန်ဆောင်မှုများ တည်းဖြတ်ခြင်း ENG ထောက်ခံမှု ရုပ်ရှင်သမားတွေ ပေါင်းစည်းမှု အိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံ Jon Flay လန်ဒန် Megahertz MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ထုတ်လုပ်မှု စတူဒီယိုအစီအစဉ်များ က Ultra HD ဖိုရမ် အမေရိကန်ထုတ်လွှင့် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-22
နောက်တစ်ခု: crystal Vision ၏အသံနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေအယုတ္တအနတ္တနှောင့်နှေးမှုစနစ်ဖြန့်ချိ
ကို Creative International-Fame အိမ်
ကို Creative စျေးကွက် International
စက်မှုဒီဇိုင်နာ / ကုန်ပစ္စည်းရေးသားသူ
နက်ရှိုင်းသောသင်ယူ International - စက်ရုပ်
မိတ်ကပ်အဆိုတော် / ဓာတ်ပုံ Editor ကို